Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka Android inay PC
Fariin SMS waa fiican kuu tahay in aad la xiriiri aad qoysaska, saaxiibada, asxaabtaada iyo dadka kale. Marka aad leedahay telefoonka ah Android, waxaad heli una dir farriimaha qoraalka haatan kasta oo markaas. Fariimaha qoraalka ah Qaar ka mid ah loo soo diray ay aad lover, waalidka ama saaxiibo, kuwaas oo si xusuus leh. Qaar ka mid ah waxa ku jira macluumaad muhiim ah oo ganacsi, oo waa in aad is ogow in kiis waa inaad iyaga si qalad ah u tirtirto.
Si kastaba ha ahaatee, xusuusta phone meesha fariimaha qoraalka ah oo dhan, waxaa lagu keydinayaa waa xadidan tahay. Macnaheedu waa in, in aad leedahay si aad u nadiifiso ilaa sanduuqa qoraalka si joogto ah si loo hubiyo in aad heli karto iyo diraan farriimaha qoraalka ah ee cusub. Marka la eego fariimaha qoraalka ah ula jeeddaan badan oo aad si, aad rabto in aad si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka Android inay PC ka hor la tirtiro. Halkan, qodobkan wuxuu kuu sheegayaa laba siyaabood oo loo sameeyo.
Habka 1. Transfer SMS ka Android inay PC la Software Desktop ah
Habka 2. Transfer SMS Android inay PC la App ah
Reading dheeraad ah: sida loo akhriyo SMS.xml ku PC
Bedelka oo dhan ama SMS Android loo doortay in ay PC iyo badbaadin sida .xml ama file txt.
Hel oo si toos ah u soo dir qoraalka ka PC aad qoysaska, asxaabta iyo kuwa kale.
Mark fariin SMS aqrin iyo dunta sida akhriyo.
SMS Android kaabta in computer ka mid click.
Delete fariimaha aan la rabin ama dunta qolka kuwa cusub.
Si buuxda u la jaan qaada dhammaan taleefanada Android caanka ah, sida HTC, Google, Motorola, Samsung, Sony, iyo in ka badan.
Fiiro gaar ah: diritaanka farriimaha waa uun laga heli karaa version Windows ee wakhtigan la joogo.
Tallaabada 1. Orod software iyo xirmaan telefoonka aad Android inay computer
Bilowga aad, download version saxda ah ee MobileGo on your computer. Waxaa rakib. Markaas, waxaa lagu daahfuri iyo isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay computer. Ka dib markii la xidhiidha, telefoonka aad Android lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa ugu weyn.
Sida user Windows ah, waxa kale oo aad ku xidhi kartaa telefoonka Android via WiFi. Laakiin, waa in aad hubiso in aad ku rakibtay file waa-leeyihiin MobileGo.apk telefoonka aad Android. Haddii aan, dejisan iyo rakibi file MobileGo.apk . Markaas, isticmaali file MobileGo.apk in lambarka sirta QR ku MobileGo desktop-ka si ay u sameeyaan xiriir.
Fiiro gaar ah: versions Windows iyo Mac Labada shaqeeyaan si la mid ah. Sidaas darteed, waxaan qaadan version Windows sida isku day ah. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, sidoo kale waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka.
Tallaabada 2. Nuqul Android Qoraallada in Computer
Tag column ka tegey oo guji SMS . Daaqadda maamulka SMS ah, dooro threads fariin in aad rabto in lagu wareejiyo ah. Riix Save sidii ay u badbaadin farriimaha si aad PC ee .xml ama qaab .txt.
Marka laga reebo software desktop, waxaa sidoo kale tahay badan barnaamijyadooda gurmad SMS Android oo ha idin ​​badbaadin doonaa SMS telefoonka Android inay card SD ka dibna wareejiyo computer. Ka mid ah, kaabta SMS & Soo Celinta taagan.
Tallaabada 1. Tag Google Play Store iyo dejisan ee kaabta SMS & Soo Celinta app.
Tallaabada 2. Daahfurka app iyo qasabadda ee kaabta in gurmad SMS in kaarka SD ee telefoonka aad Android.
Tallaabada 3. Buur telefoonka aad Android sida drive dibadda adag by isticmaalaya cable USB ah.
Tallaabada 4. your computer, heli telefoonka aad Android oo la furo folder card SD ah.
Tallaabada 5. Raadi file .xml ah, oo nuqul ka si aad u computer
Reading dheeraad ah: sida loo akhriyo SMS.xml on PC
Sida caadiga ah SMS Android aad wareejiyo PC waa la badbaadiyey sida .xml file, file .txt ama file HTML. Labada qaabab hore si fudud la akhrin karo. Si aad u akhriso file SMS.xml, waxaad u baahan tahay in ay taageero ka ah qalab dhinac saddexaad barbaro - buugayga ++ . Waa editor ah isha code lacag la'aan ah, kuu akhriyo file SMS.xml ee ku haboon.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha xaalkaa file .xml marka la isticmaalayo buugayga ++. Ama, faylka laga yaabaa in waxyeelo.
Bedelka Xiriirada Android inay PC
Bedelka Photos Android inay PC
Bedelka Android Xiriirada in Outlook
Android kaabta in SD Card
Oo la wareegtay Android Screen iyo Bedelka in Computer
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka Phones Android inay PC